UYILUNGISA NJANI INGXABANO YEDILESI YE-IP - ITHAMBILE
Uyilungisa njani ingxabano yedilesi ye-IP
Ngaba kukho naziphi na iinkqubo zakho eziye zavela ngomyalezo wemposiso malunga nengxabano yedilesi ye-IP? Okwenzeka ngaphakathi kuxa uqhagamshela inkqubo yakho, iifowuni eziphathwayo, okanye naziphi na izixhobo ezinjalo kuthungelwano lwasekhaya; bonke bafumana idilesi ye-IP eyahlukileyo. Eyona njongo iphambili yoku kukubonelela ngobuchule bokwenza idilesi kuthungelwano kunye nezinto zalo. Oku kunceda ekwahluleni isixhobo ngasinye kwinethiwekhi enye kwaye sincokole omnye komnye ngokwamanani.
Nangona ayisiyonto eyenzeka rhoqo, Idilesi ye-IP ungquzulwano ziingxaki zokwenyani kunye neengxaki kakhulu kubasebenzisi. Idilesi ye-IP engqubanayo yenzeka xa ezi-2 okanye ngaphezulu kweenkqubo, indawo zokugqibela zonxibelelwano okanye izixhobo ezigcinwe ngesandla kwinethiwekhi enye yomoya inikwa idilesi ye-IP efanayo. Ezi ziphelo zingangama-PC, izixhobo eziphathwayo, okanye ezinye izinto zenethiwekhi. Xa olu ngquzulwano lwe-IP lwenzeka phakathi kweendawo ezimbini zokuphela, ibangela ingxaki ekusebenziseni i-intanethi okanye ukunxibelelana ne-intanethi.
le iplagi ayixhaswanga chrome Android
Zenzeka njani iingxabano zedilesi ye-IP?
Ukwamkela ukungqubana kweedilesi ze-IP
Indlela yoku-1: Qalisa iModem yakho okanye i-Wireless Router
Indlela yesi-2: Flush DNS kwaye usete kwakhona i-TCP / IP
Indlela yesi-3: Cwangcisa idilesi ye-IP emileyo kwiKhompyuter yakho yeWindows
Kukho iindlela ezahlukeneyo apho isixhobo sinokufumana ukungqubana kwedilesi ye-IP.
✓ Xa umlawuli wenkqubo abela iinkqubo ezi-2 ngedilesi ye-IP emileyo kwi-LAN.
✓ Amatyala, xa ingingqi yakho I-DHCP umncedisi unikezela idilesi ye-IP kwaye kwaleyo dilesi ye-IP yabelwe ngumlawuli wenkqubo ngelixa unikezela i-IP emileyo ngaphakathi kwenethiwekhi ye-DHCP yendawo.
✓ Xa iiseva ze-DHCP zokungasebenzi kakuhle kwenethiwekhi yakho kwaye ziphela zinika idilesi enye enamandla kwiinkqubo ezininzi.
✓ Iingxabano ze-IP zinokwenzeka nakwezinye iifom. Inkqubo inokufumana ukungqubana kwedilesi ye-IP nayo xa le nkqubo iqwalaselwe ngeeadaptha ezahlukeneyo.
Isilumkiso sesiphene okanye izikhombisi ngokubhekisele kungquzulwano lwe-IP ziya kuvela ngokusekwe kudidi lomatshini ochaphazelekayo okanye i-OS esebenzayo kwinkqubo. Kwiinkqubo ezininzi ezisekwe kwiMicrosoft yeWindows, uya kufumana lo myalezo wemposiso ulandelayo:
Idilesi ye-IP emileyo esele iqwalaselwe sele isetyenziswa kwinethiwekhi. Nceda uqwalasele kwakhona idilesi ye-IP eyahlukileyo.
akukho khetho lokuvula ibluetooth
Kwiinkqubo ezintsha zeMicrosoft yeWindows, ufumana impazamo yebhaluni ethi gqi ngezantsi kwi-Taskbar ngokubhekisele kwiimpikiswano ezinamandla ze-IP ezithi:
Kukho idilesi ye-IP engqubanayo nenye inkqubo kwinethiwekhi.
Kwezinye oomatshini abadala beWindows, umyalezo osisilumkiso okanye umyalezo onolwazi unokuvela kwiwindows pop-up isithi:
Inkqubo ibone ukungqubana kwidilesi ye-IP…
IWindows ifumene ungquzulwano lwedilesi ye-IP.
Ke ngaphandle kokuchitha naliphi na ixesha, masibone Uyilungisa njani ingxabano yedilesi ye-IP kwiWindows ngoncedo lwesifundo esidweliswe apha ngezantsi.
Qiniseka ukuba yenza indawo yokubuyisela xa kunokwenzeka into ingahambi kakuhle.
Ngokwesiqhelo, ukuqala kwakhona okulula kunokuyihlela kwangoko ingxaki yedilesi ye-IP. Kukho iindlela ezi-2 zokuba umntu angaqala kwakhona imodem okanye i-router engenazingcingo:
1. Ngena kwiphepha lakho lolawulo ngokuvula isikhangeli (chwetheza ibha yedilesi kuyo nayiphi na le IP ilandelayo - 192.168.0.1, 192.168.1.1, okanye 192.168.11.1 ) emva koko ujonge Ulawulo -> Qalisa kwakhona.
2. Cima umbane ngokukhupha iplagi yamandla okanye ucofe iqhosha lawo uze uphinde ubuye emva kwexesha elithile.
Nje ukuba uqalise kwakhona imodem okanye umzila wakho, qhagamshela ikhompyuter yakho kwaye ujonge ukuba uyakwazi Lungisa ingxaki yedilesi ye-IP okanye hayi.
1. Vula i-Command Prompt. Umsebenzisi unokwenza eli nyathelo ngokukhangela ‘Cmd’ kwaye ucinezela u-Enter.
Ukubuyiselwa kwenkqubo akuzange kugqibe ngempumelelo windows 10
2. Ngoku chwetheza lo myalelo ulandelayo kwaye ucofe u-Enter emva komntu ngamnye:
ipconfig / ukukhutshwa
ipconfig / hlaziya
3. Kwakhona, vula i-Admin Command Prompt kwaye uchwetheze oku kulandelayo kwaye ucofe ukungena emva komnye:
Uhlaziyo lwewindows alusebenzi
ipconfig /flushdns nbtstat –r netsh int ip reset netsh winsock reset
4. Qalisa kwakhona ukufaka utshintsho. Ukucoca i-DNS kubonakala ngathi ukulungisa iiWindows kufumanise impazamo kwidilesi ye-IP.
Ukuba le ndlela ingentla iyasilela ukulungisa umba wedilesi ye-IP yongquzulwano, kuyacetyiswa ukuba uqwalasele idilesi ye-IP emileyo kwikhompyuter yakho ngesandla. Kule nto, la manyathelo alandelayo:
1. Ngasekunene kwebar yomsebenzi wakho, cofa ekunene kwi Inethiwekhi icon kwaye ucofe i Vula iisetingi zenethiwekhi kunye neze-Intanethi ukhetho.
2. Ngoku Useto lwefestile luya kuvulwa, cofa ku Inethiwekhi kunye neZiko loKwabelana phantsi koseto olunxulumene noko.
3. Ngoku, khetha iadaptha yenethiwekhi oyisebenzisayo ngoku (kunye naleyo ifumana lo mbandela).
4. Cofa kunxibelelwano esele lukhona, luya kuvela ngebhokisi yencoko yababini. Cofa u Iipropati ukhetho.
5. Ngoku, cofa kabini IProtokholi yenguqulo 4 (TCP / IPv4) ukhetho.
6. Iya kukuvumela ukuba uqwalasele i-IP yakho emileyo esekwe kwiinkcukacha zakho zemodem okanye zendlela. Apha ngezantsi ngumzekelo nje kwenye yezo meko:
Phawula: Ukuba idilesi ye-IP yemodem / umzila wakho yahlukile, njenge-192.168.11.1, idilesi ye-IP emileyo kufuneka ilandele indlela yayo, umzekelo, 192.168.11.111. Ngaphandle koko, ikhompyuter yakho yeWindows ayinakukwazi ukunxibelelana nenethiwekhi.
cima uhlaziyo oluzenzekelayo windows 10 ikhaya
IP address: 192.168.1.111   Subnet mask: 255.255.255.0   Default gateway: 192.168.1.1   Preferred DNS server: 8.8.8.8   Alternative DNS server: 8.8.4.4
7. Nje ukuba ugcwalise zonke iinkcukacha ezifunekayo, cofa u-OK kwaye uqalise ukusebenza kwi-PC yakho.
Utshintsha njani kwiiThebhu zesikhangeli usebenzisa isitshixo sendlela
Guqula ukusuka kuLuntu uye kwiNethiwekhi yaBucala kwi Windows 10
Ufuna ukuHlela iFayile yemikhosi ngaphakathi Windows 10? Nantsi indlela yokwenza!
Uyenza njani iNdawo enye yokuBala eLizwini
Ndiyathemba ukuba la manyathelo angentla ayeluncedo kwaye ngoku ngokulula Lungisa ukungqubana kweedilesi ze-IP kwiWindows kodwa ukuba usenayo nayiphi na imibuzo malunga nesi sifundo emva koko uzive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lamagqabaza.
Amava eBhodi eqhotyoshwayo enikwa ilifu yaziswa Windows 10 Okthobha 2018 uhlaziyo
Amava ebhodi eqhotyoshwayo entsha enikwe ilifu, Yaziswa kuyo Windows 10 Okthobha 2018 uhlaziyo, Masiqwalasele amava ebhodi eqhotyoshwayo kunye nendlela yokwenza ukuba ukuvumelanisa kwebhodi eqhotyoshwayo kuzo zonke izixhobo
Lungisa iiMalwarebyte azinakho ukuqhagamshela impazamo yeNkonzo
Ukulungisa ii-Malwarebyte ezingakwaziyo ukuqhagamshela impazamo yeNkonzo qinisekisa ukuba iiNkonzo zeMalwarebyte ziyasebenza, Phinda ufake iiMalwarebyte kwiNdlela eKhuselekileyo.
Lungisa ifowuni ye-Android engaziwa kwiWindows 10
Iindlela ezi-3 zokuCima iiFayile eziKhuselwe yi-TrustedInstaller
Uyicima njani iMidlalo yoBomi yeThug kwiFacebook Messenger
Ungabasusa kanjani Bonke okanye izihlobo ezininzi kwiFacebook
Ungamcaphula njani umntu othile kwiNgxabano
Ukulungisa iiWindows akunakunxibelelana nesixhobo okanye isixhobo (i-Primary DNS Server)
I-100 yeepaswedi eziqhelekileyo ze-2021. Ngaba uyalibona igama lakho eliyimfihlo?
Eyona VPN iphambili kwiWindows PC yokunyusa ukhuseleko kunye nokuNgasese (ihlaziyiwe ngo-2021)
Uyenza njani Windows 10 Iakhawunti usebenzisa i-Gmail
Lungisa iKhowudi yeMpazamo yeWindows yeWindows 0x803F8001
Uqhagamshelo lwenethiwekhi yendawo akunaqwalaselo olusebenzayo lwe-ip
i-avast web shield ayiyi kuvulwa
Awunakho ukutshintsha isisombululo windows 10
Uhlaziya njani windows 10 1903
lungisa imemori ephantsi windows 10
windows i-wifi engagqibekanga yesango ayifumaneki
chrome isebenzisa kakhulu i-cpu
© 2022 jf-oeiras.pt | Umthetho Wabucala